Ny VFX Legion dia mamorona fiantraikany amin'ny 'Sakafo izay namboarina an'i Amerika,' ny Fandaharam-potoana Fandaharam-potoana vaovao an'ny Docudrama History History - NAB Show News avy amin'ny Broadcast Beat, Broadcast ofisialy NAB Show - NAB Show LIVE
Home » News » Ny legiona VFX dia mamorona fiantraikany amin'ny 'ny sakafo namboarina an'i Amerika,' ny andiany vaovao amin'ny Fitaovana Mini Mini Series
Ny legiona VFX dia mamorona fiantraikany amin'ny 'ny sakafo namboarina an'i Amerika,' ny andiany vaovao amin'ny Fitaovana Mini Mini Series
VFX Legion vao haingana dia nahavita fifangaroana be pitsiny momba ny horonantsary andiany vaovao an'ny horonan-tsarimihetsika vaovao an'ny Channel Channel, 'Ny Sakafo izay Manamboatra Amerika.' Ny orinasa miorina amin'ny Burbank dia niasa isaky ny dingana tamin'ny famokarana, hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Ny ekipany dia teny an-toerana nandritra ny scouting sy ny seho nandritra ny famokarana tany New York, tamin'ny alàlan'ny fampitana farany ny seho misokatra nomena tamin'ny ora fahiraika ambin'ny folo tamin'ny famokarana.
Navoakan'i Lucky 8 avy any New York, ny 'The Food izay namboarina America' dia mitantara ireo tantaran'ny mpahay fahitana - toa an'i Milton Hershey, John ary Will Kellogg, Henry Heinz, CW Post, ireo mpirahalahy McDonald - izay nanamboatra ireo marika sy namorona ny teknolojia izay nanova ny indostrian'ny sakafo. Ny docudrama dia mitantara ny anjara toeran'ny titans amin'ny famolavolana ny tontolon'ny culinary ao amin'ny faramparan'ny taonjato, amin'ny fampiasana fiasa manaitra izay mamerina ny fijerin'ny vanim-potoana miaraka amin'ny marimaritra iraisana.
Anisan'ireo asa sarotra indrindra nataon'i VFX Legion dia ny fanamboarana ireo rafitra ankehitriny sy ny fanitarana lehibe natao hanamboarana trano fivarotana sy trano avy amin'ny vanim-potoana teo aloha. Nihazakazaka i Legion mba hiatrika fanamby hafa rehefa tsy notifirin'ny takelaka tany am-boalohany ny orinasa Hershey sy ny manodidina azy. Ny ekipany dia nanamboatra famokarana dizitaly feno amin'ny orinasa sy ny tontolo midadasika manodidina azy - hatramin'ny tany ambony. Ny tifitra dia namerina namorona ny fomba fanaon'ny vanim-potoana maritrano, ary koa ny fahatsapana an-tsary amin'ny sarimihetsika.
Tsara vintana 8Ny talen'ny famoronana Yoshi Stone dia niara-niasa tamin'ny Legion's LA In-house VFX Mpanolotsaina Matthew Lynn ary talen'ny famoronana.
James Hattin. Izy ireo dia namolavola ny fijerin'ny seta mifototra amin'ny fivoriana ara-teknikan'ny scout ara-teknika izay nanatrehan'i VFX Legion an'i New York, Mpanabe miorina ao New York.
Niara-niasa tamin'ny ekipa mpamokatra Lucky 8 nandritra ny zana-tsipìka, i Pascarelli dia nahazo antoka fa nanana ny tànan'ireo mpanakanto Legion miverina ao Burbank izy ireo. Ny famaritana momba ny antsipiriany sy ny fandrefesana ny tifitra nomeny dia azo antoka fa nahazo azy ireo tamin'ny fotoana voalohany izy ireo ary afaka nitodika haingana ny vokatra ara-maso rehetra ary nahomby. VFX Legion dia nanao fihaonambe horonantsary Zoom mba hiara-hiasa mandritra ny vanim-potoana famokarana, ary hiatrika ny drafitra mihetsika tsy mitsaha-mitombo ary miantoka ny ekipa amin'ny roa ny morontsiraka dia mitovy amin'ny pejy iray ihany.
Rehefa tara ny lalao dia nanontany i Lucky 8 VFX Legion hamorona ilay fonosana mivelatra misokatra. Ny ekipa dia namorona lamina marika sy fomba fanamboarana azy sy ny logo. Ny ekipan'ny orinasa LA dia namolavola sy namolavola ny fisokafana ary namboarina tsara arakaraka ny fanapahan-kevitry ny famoahan'ny mpanjifa.
“'Ilay sakafo nanorina an'i Amerika' dia fampisehoana vidiny raikitra noho ny fomba nanamboarany azy », hoy i Hattin, mpanorina an'i Legion. "Takian'izy ireo ny karazana vahaolana azo ampiharina amin'ny fantson-tsika mpisava lalana sy ny fomba fisaintsainana mialoha amin'ny famokarana fahitana ara-pahitana."
"Ny fiasana amin'ny docudrama miaraka amin'i Lucky 8, orinasa iray any New York izay namorona mpahay lalàna malaza dia be," hoy i Hattin nanampy. "History Channel dia fonenan'ny antontan-taratasy mitohy sy dokambarotra izay manintona sy mahaliana ny mpihaino miaraka amina fandaharana mavitrika momba ny lasa sy ankehitriny. Ny ekipan'ny Legion dia nahafaly sy nankasitraka ny fahafahany miasa amin'ity karazana ity. ”
VFX Legion dia nampiasa fitaovana mifangaro mba hamoronana ireo tifitra ho an'ny andiany, anisan'izany ny The Foundry's Nuke for compositing, Adobe Photoshop ho an'ny sary hosodoko matte, Redshift ho an'ny 3D rendering, Autodesk's Shotgun ho an'ny fitantanana ny tetikasa, AutodeskMaya ho an'ny jiro 3D sy ny fampahavitrihana, novolavolaina ny sary namboarina tamin'ny alàlan'ny Adobe After Effects / Illustrator ary Signiant Media Shuttle dia nampiasaina hamindrana rakitra.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny VFX Legion LA / BC sy ny serivisy dia tsidiho ny fitsidihana www.VFXLegion.com, antsoy ny 818-736-5855, na mailaka [mailaka voaaro].
Lohateny: 'Ny Sakafo Nanamboatra an'i Amerika'
Type: VFX ho an'ny Mini-Series / Docudrama
Airdates: Aogositra 11-13 / Tantara
Mpanjifa: Tantara Channel / NYC
Mpanatanteraka mpanatanteraka: Jim Pasquarella
Mpanatanteraka mpanatanteraka: Mary E. Donahue
VP Mpanatanteraka sy Lohan'ny Programa: Eli Lehrer
Mpaninjara: tambajotra A + E
Navoakan'i: Lucky 8 / NYC
Tale: Nick White
Mpanatanteraka mpanatanteraka: Yoshi Stone, Greg Henry, Kim Woodard, Isaac Holub
Vokatry ny Visual: VFX Legion / LA, BC
Tale mpamorona: James David Hatting
Mpanolotsaina / fampirantiana VFX: Matthew T. Lynn
On-Set VFX Mpanolotsaina / NY: Eric Pascarelli
Mpanara-maso 3D: Rommel S. Calderon
Fampitahana: Nick Guth
Fampitahana: Brad Moylan
Fampitahana: Eugen Olsen
Fanaraha-maso fakan-tsary: ​​Guy Delgado
Fitaovana Pipeline: Brandon Rachal
Sary Matte: Christian Haley
Matte hosodoko: Jim Hawkins
Sary Matte: Eric Mattson
Matte hosodoko: Yvonne Muinde
VFX Mpandrindra: Amanda VanDeCar
Ny legiona VFX dia mamorona fiantraikany amin'ny 'ny sakafo namboarina an'i Amerika,' ny andiany vaovao amin'ny Fitaovana Mini Mini Series - Aogositra 13, 2019
Ny kolonely dia mahazo loka roa amin'ny telestialy ho an'ny fampielezan-kevitra amin'ny dokambarotra Porsche - Aogositra 13, 2019
Ny Vondrona VFX dia manokatra ny voka-pandrefesana ho an'ny 'MA', sarimihetsika mahatsiravina - Jona 21, 2019
Advocate Aurora Health Campaign / Ny Colonie Fampahalalam-baovao mivantana-sosialy Fampitana-SocialMedia Fampitana-SocialMeida FOR-A, rafitra vitsivitsy, Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor SJGolden - Spears & Arrows THE COLONIE / Chicago VFX VFX ho an'ny Fim VFX ho an'ny TV VFX Legion	2019-08-13
Previous: IBC2019: Manohana ny bokotra 4K ho an'ny Studio sy fampiharana amin'ny finday ny vahaolana vaovao Cobalt Digital Solutions Digital Cobalt.
Next: Julian Fernandez-Campon Nantsoina ho lehiben'ny teknolojia an'i Tedial